Myanmar : Iza No Nihavian’ny Rotaka Tao Meikhtila ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Avrily 2013 5:02 GMT
Nametraka fotoana tsy azo ivezivezena ny polisy taorian'ny fandoroana trano sy moto tao an-toerana izay nataon'ny vondron'olona. Satria natahotra ny fiarovana ny ain'izy ireo ny Miozolomana, ary dia nangataka hiala ao afovoan-tanàna. Narovan'ireo polisy sy ireo mpikambana ao amin'ny Tanora Bodista izy ireo manerana ny lalana.
Nandefa sary ahitana soratra mivaky hoe « Aza avela hiseho ny fifandonana ara-pivavahana noho ny ataonao ! » ny Fikambanan'ny Tanora Bodista, ary ahitana izao fanazavana manaraka izao:
Tun Zaw Anyar Myay miahiahy [my] ny amin'ny mety hisian'ny gidragidra tsy misy farany:
Etsy andaniny, misy ireo manontany raha noho ny antony hafa no nahatonga ireo fitroarana. Thanda Win nanamarika [my] fa mifanojo amin'ny fandehanan'ireo tompon'andraikitra politika any ivelany ny herisetra nipoaka tao amin'ny firenena :
Satria tonga tao Myanmar ny talen'ny Google, Eric Schmidt tamin'ity herinandro ity.
Ye Min Htun nampitaha [my] ny toe-draharaha ankehitriny amin'ny zava-niainany tamin'ny fikomiam-bahoaka tamin'ny taona 1988. Mitsipaka ny fihenjanam-pihetsika “extremisme” ihany koa izy:
Mg Byine O, mpiavy avy ao Meikhtila, nanome ny heviny ihany koa [my] mikasika ny rotaka.
Ao Meikhtila, manana finoana isan-karazany ny mponina – hindoisma, islamo, kristianisma ary koa finoana nentim-paharazana. Mifandray tsara avokoa ny olona. Tsy manana olana izahay. Indraindray misy ihany ny fifandirana eo amin'ny resa-pinoana fa tsy lasa lavitra tahaka izao. Marobe ireo biraon'ny polisy, ary raha mampiteraka korontana na olana ianao dia mety higadra. […] Fantatry ny olon-drehetra ao Meikhtila izany. Mifangaro am-pilaminana ny rehetra. Ankehitriny, tsy ady ara-pivavahana izao, fa fanomezan'endrika azy.[…] Laviko ny fihainoana ny fanambaran'ny jeneraly izay milaza hoe « Voafehin'ny miaramila ny firenena mba hampitsahatra ny faharatsian'ny fari-piainana ao amin'ny firenena rehetra ». Fioo… […]
@yemyat91 : Ireo olona ambany saina ihany no iharan'ny ataon'ny atidoha ambadik'ity korontana politika ity. Efa mahazatra azy ireo ny rà sy ny fahatezerana #Myanmar
Misy ihany koa ireo mpiserasera no manakiana ireo mahery fihetsika sy ireo olona mandefa vaovao diso sy lainga. Moe Zay Nyein nanangona ny lisitr'ireo [my] pejy Facebook mpandefa vaovao tsy marina sy lahatsoratra mahery fihetsika mampiasa teny bodista sy miozolomana. Eleven Media, sampan-gazety malaza ao an-toerana, namoaka [my] fa diso ilay lahatsoratra [my] tao amin'ny pejy Facebookn'ny BBC izay milaza fa olona 10 no namoy ny ainy (21 martsa 2013).